Onye na -akwado akwarium, gịnị ka ọ bụ na nke kacha mma? | Nke azụ
Natalia Cerezo | 23/08/2021 09:09 | Ngwa
Anyị ekwuola ọtụtụ oge na nke kachasị sie ike, yana nke kachasị mkpa, mgbe ịnweta akwarium dowe onye na -ajụ ajụ. Nke a pụtara na ekwesịrị idobe ya n'ime oke okpomọkụ, site n'enyemaka nke onye na -akwado akwarium, yana mmiri dị ọcha, n'ọnọdụ ka azụ nwee ike dịrị ndụ.
Taa, anyị ga -elekwasị anya na nke mbụ, ka esi edobe ọnọdụ okpomọkụ na akwarium, ihe siri ike karị n'ọnwa ndị na -ekpo ọkụ dị ka ndị a. Yabụ, anyị ga -ahụ ụdị onye na -akwado akwarium dị iche iche nke ga -enyere anyị aka idobe okpomọkụ nke akwarium, yana ndụmọdụ maka ịhọrọ ya na ụdị kachasị mma, n'etiti ndị ọzọ. Site n'ụzọ, iji lelee ọnọdụ okpomọkụ a tụkwasịrị obi, anyị na -akwado isiokwu a ọzọ gbasara ihe kacha mma temometa nke akwarium.
1 Ezigbo ndị na -akwado akwarium
2 Ụdị ndị na -akwado akwarium
2.2 Gbachi nkịtị
2.3 Na nyocha
2.4 Nano onye ofufe
3 Ụdị kachasị mma nke ndị na -akwado akwarium
4 Kedu ihe onye na -akwado akwarium?
5 Otu esi ahọrọ onye ofufe akwarium
5.1 Nha Aquarium
5.2 Sistemụ ndozi
6 Otu esi eji onye na -akwado akwarium
7 Akwarium ma ọ bụ ngwa nju oyi? Kedu uru na ọghọm nke ọ bụla?
8 Ebe ị ga -azụta ndị na -akwado akwarium dị ọnụ ala
Ezigbo ndị na -akwado akwarium
Fan Yantan ...
Onwe - Onye na - akwado ...
Ndị na -akwado Aquarium ...
Igwe nju oyi, ...
Ụdị ndị na -akwado akwarium
Ikekwe, Fans niile na -eme otu ihe ahụ, mana dịka ọ na -adị mgbe niile enwere ọtụtụ ngwaahịa nwere ike ime mgbanwe ma kwekọọ na gị na azụ gị ma ọ bụ, ihe egwu, bụrụ ihe na -abaghị uru ọ baara anyị. Ọ bụ ya mere anyị ji chịkọta ụdị ndị na -akwado akwarium iji nyere gị aka ịchọta ngwaọrụ zuru oke.
Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime ihe kacha baa uru, ma ọ bụrụ na ọ baghị uru, ọkachasị ma ọ bụrụ na enweghị ntụpọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ n'okwu a. Ndị na -ahụ maka thermostat nwere ọrụ akpaka na -agbanyụ na -akpaghị aka mgbe akwarium ruru ogo a chọrọ, ma na -arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ a akarịala.
Ụfọdụ thermostats bụ ngwaọrụ ị ga -azụ na mgbakwunye na onye na -akwado ya. Emebere ha ka ha jikọọ na ya, ma nwee ihe mmetụta okpomọkụ nke na -abanye n'ime mmiri ka, tụọ okpomọkụ ya. Ụdị ngwa maka akwarium, dị ka JBL, na -atụ aro ka ị na -eji thermostat gị naanị na ndị na -akwado akara ha iji zere ekweghị ekwekọ na ngwaọrụ, voltaji ...
Onye ofufe nkịtị Ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere akwarium nso (dịka ọmụmaatụ, n'ọfịs) ma ị chọghị ime mkpọtụ. Mgbe ụfọdụ ọ na -esiri ha ike ịchọta, ma ọ bụ na ha anaghị emezu ihe ha kwere na nkwa, yabụ na ọnọdụ ndị a, a na -atụ aro nke ukwuu ka ịlele echiche ngwaahịa a na ịntanetị.
Nhọrọ ọzọ, dịtụ nwayọ karịa ndị na -akwado ya, bụ igwe nju oyi. (nke anyị ga -ekwu maka ya ma emechaa), nke na -eme otu ihe ahụ, mana obere mkpọtụ.
Igwe ikuku na nyocha ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe nlereanya nwere thermostat, ebe, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, kedu ihe ọzọ ka ngwaọrụ a ga -esi rụọ ọrụ? Dị ka ọ na -adịkarị, nyocha bụ eriri ejikọtara na ngwaọrụ ahụ, ya na onye nyocha n'onwe ya na njedebe, nke ị ga -emikpu n'ime mmiri iji chọpụta ọnọdụ okpomọkụ.
Nano onye ofufe
Maka ndị na -achọghị nnukwu onye ofufe na -adịghị mma, enwere ụfọdụ ndị pere mpe, na -enwekarị ọmarịcha na kọmpat, nke na -ahụ maka ime ka mmiri dị ọhụrụ n'ime akwarium gị. Ee n'ezie, na -arụ ọrụ na akwarium ruo oke ụfọdụ (lelee ya na nkọwa nke ihe nlereanya), ebe ọ bụ na ha pere mpe, ha anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Ụdị kachasị mma nke ndị na -akwado akwarium
Enwere ụdị isi atọ pụrụ iche na ngwaahịa akwarium na, kapịrị ọnụ karị, na fan na sistemụ jụrụ oyi.
Boyu bụ ụlọ ọrụ guzobere na Guangdong (China) nwere ahụmịhe ihe karịrị afọ iri abụọ na -emepụta ngwaahịa akụrụngwa. N'ezie, Ha nwere ụdị ngwaahịa dị iche iche, site na ndị na -akwado ya ruo ndị na -eme mkpagharị, na n'ezie ọtụtụ akwarium dị iche iche, jiri obere arịa ụlọ na ihe niile iji mee ka ha maa mma.
Akara Barcelonan a anaghị enye ma ọ bụ ihe na -erughị kemgbe 1996 na -eme akwarium na ngwaahịa emere iji melite ndụ azụ anyị dịịrị ndị na -akwado ya. Banyere Fans, na -enye otu n'ime ụzọ dị ọnụ ala iji mee ka akwarium gị dị ọhụrụ na ahịa, yana ndị na -ekpo ọkụ, ọ bụrụ na ịchọrọ mmetụta nke ọzọ.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ụlọ ọrụ kacha ama ama na akara ngwaahịa akwarium nwere ogologo akụkọ ihe mere eme, ebe ntọala ya malitere na iri afọ isii na Germany. Kedu ihe ọzọ, ha nwere ọtụtụ sistemụ jụrụ oyi dị, na ọ bụghị naanị maka obere akwarium, mana ha na -enye azịza ọbụlagodi maka akwarium ruo lita 200.
Kedu ihe onye na -akwado akwarium?
Okpomọkụ bụ otu n'ime ndị iro kacha njọ nke azụ anyị, ọ bụghị naanị n'ihi na o siri ike ịnagide, kamakwa n'ihi na, na -ekpo ọkụ, ikuku oxygen adịghị na mmiri. N'elu, n'ime azụ, usoro ntụgharị na -eme, ebe ọ bụ na ọkụ na -eme ka ha rụọ ọrụ ma na -eme ka metabolism ha na -achọkwu oxygen ka ha dịrị ndụ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na mmiri dị oke ọkụ, ọ ga -esiri azụ ike iku ume. Ọ bụ ya mere ijigide okpomọkụ nke akwarium dị oke mkpa, yana ihe kpatara anyị ji achọ temometa na sistemụ ikuku nke na -ahụ maka idobe mmiri na oke ikuku kwesịrị ekwesị.
Otu esi ahọrọ onye ofufe akwarium
Dị ka anyị hụworo na mbụ, e nwere ọtụtụ ụdị nke FansỌ ga -adabere na mkpa na mmasị anyị ịhọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ bụ ya mere anyị ji kwadebe ndepụta a na ihe ndị a na -ahụkarị mgbe ị na -ahọrọ onye na -akwado akwarium zuru oke:
Nke mbu Ihe kachasị mkpa anyị ga -eleba anya bụ nha akwarium. N'ụzọ doro anya, nnukwu akwarium ga -achọ ndị na -akwado ya, ma ọ bụ karịa ike, ka ha nwee ike idobe mmiri na oke okpomọkụ. Mgbe ị na -aga ịzụta onye na -akwado ya, lelee nkọwapụta ya, ọtụtụ ndị egwu na -egosi ruo lita ole ha nwere ike ịjụ oyi.
Sistemụ ndozi bụ nwere njikọ chiri anya na ọ dị mfe onye ofufe na -ezukọta na ebukọtala. Ọtụtụ na -enwe sistemụ mkpanaka nke na -ejikọ n'elu akwarium iji jụọ oyi site n'elu, otu n'ime ụzọ kachasị ọsọ na nke kachasị adaba iji bulie ma wepụ onye na -akwado ya wee chekwaa ya mgbe anyị na -achọghị ya ọzọ, dịka o nwere ike, dabere na ebe ka anyị dịrị ndụ, na anyị na -eji ya naanị n'ọnwa kacha ekpo ọkụ n'afọ.
Dịka anyị kwuru na mbụ, mkpọtụ nke onye na -akwado ya bụ ihe ị ga -eburu n'uche ma ọ bụrụ na ị nwere akwarium n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ n'ime ụlọ iri nri ma ị chọghị ime ara. Agbanyeghị ụdị kachasị dị mfe anaghị adịkarị nwayọỌ bụ nhọrọ na -atọ ụtọ nke ị nwere ike lelee na nkọwa ngwaahịa. N'okwu a, a na -atụkwa aro nke ukwuu ịhụ ihe ndị ọrụ chere maka ngwaahịa a, ọbụlagodi na -achọ vidiyo na YouTube iji hụ ka ọ na -ada.
N'ikpeazụ, Ọsọ fan na -emetụta ike. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ na-adị ọnụ ala karịa ịzụrụ ndị egwu atọ n'otu karịa otu dị ike nke ukwuu, n'ihi na nke a ga-ajụ mmiri nke ọma, nke kachasị mkpa na nnukwu akwarium.
Otu esi eji onye na -akwado akwarium
Na mgbakwunye na onye na -akwado akwarium, enwere ihe ndị ọzọ na -enyere aka mee ka mmiri dị mma. Iji mezuo nke a, soro ndụmọdụ ndị a:
Debe akwarium ahụ site na isi mmalite ọkụ ma ọ bụ ìhè anyanwụ (Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ dị nso na windo, mechie ákwà mgbochi). Ọ bụrụ na ị nwere ike, dobe ụlọ akwarium ka o kwere mee.
Mepee mkpuchi n'elu ime ka mmiri dị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, belata ọkwa mmiri dị sentimita ole na ole ka azụ gị ghara ịwụli elu.
Gbanyụọ ọkụ akụrụngwa, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ belata awa ha nọ, iji belata isi mmalite ọkụ.
Wụnye fan na -eso ntuziaka ngwaahịa. Ọ kacha mma idobe ya ka o wee kpuchie oke mmiri dịka o kwere mee n'elu. N'ime nnukwu akwarium, ị nwere ike chọọ ngwugwu nwere ọtụtụ ndị na -akwado ya ka mmiri wee jụ oyi.
N'ikpeazụ, na -enyocha temometa ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị iji hụ na ọ dị mma. Ọ bụrụ na ọ bụghị, zere ịjụ mmiri site n'ịgbakwụnye akpụrụ mmiri ma ọ bụ mgbanwe mberede na ọnọdụ okpomọkụ nwere ike imesi azụ gị ike.
Akwarium ma ọ bụ ngwa nju oyi? Kedu uru na ọghọm nke ọ bụla?
Agbanyeghị na ebumnuche gị bụ otu, onye ofufe na igwe nju oyi abụghị otu ngwa. Nke mbụ dị nfe karịa, ebe ọ bụ na ọ nwere ihe na -akwado ya ma ọ bụ ọtụtụ na -eme ka mmiri dị n'elu dị jụụ, nke ụdị ya dị mgbagwoju anya na -esonyere na thermostat na -agbanye ma ọ bụ gbanyụọ na -akpaghị aka mgbe ọ chọpụtara na mmiri adịghị na oke okpomọkụ.
Kama nke ahụ, ngwa nju oyi bụ ngwaọrụ dị mgbagwoju anya ma dị ike karịa. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ike idobe akwarium gị na ọnọdụ okpomọkụ dị mma, ọ nwekwara ike mee ka ọkụ si na ngwa ndị ọzọ etinyere na akwarium n'ọnụ mmiri. Igwe nju oyi bụ ezigbo nnweta maka nnukwu akwarium ma ọ bụ nke siri ike, ee, ha dị oke ọnụ karịa onye ofufe.
Ebe ị ga -azụta ndị na -akwado akwarium dị ọnụ ala
Enweghị ọtụtụ ebe ị nwere ike ịhụ ndị na -akwado akwariumNke bụ eziokwu bụ, ebe ọ bụ na ha bụ ngwaọrụ akọwapụtara nke a na -ejikarị naanị ọnwa ole na ole n'afọ. A) Ee:
En Amazon Ọ bụ ebe ị ga -ahụ ụdị ndị na -akwado ya kachasị elu, n'agbanyeghị na mgbe ụfọdụ ịdị mma ha na -ahapụ ihe a ga -achọ. Yabụ, ọkachasị na nke a, anyị na -akwado ka ị lezie anya nke ọma na echiche nke ndị ọrụ ndị ọzọ, ndị ga -enwe ike ịnye gị ihe ngosi ma ngwaahịa a ọ ga -abara gị uru ma ọ bụ na ọ gaghị aba.
N’aka nke ozo, n’ime ụlọ ahịa anụ ụlọ Ọpụrụiche, dị ka Kiwoko ma ọ bụ Trendenimal, ị ga -ahụkwa ụdịdị ole na ole dị. Ọzọkwa, ihe dị mma gbasara ụlọ ahịa ndị a bụ na ị nwere ike jiri aka gị were anya gị hụ ngwaahịa ahụ, ọbụnadị jụọ onye nọ n'ụlọ ahịa ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ.
Onye na -akwado akwarium nwere ike ịchekwa ndụ azụ gị n'ime ọnwa kachasị mma n'afọ, na ihe ịrụ ụka adịghị ya na ngwaọrụ bara ezigbo uru. Gwa anyị, kedu ka azụ gị si anagide okpomọkụ? Ị nwere onye ofufe na -arụ ọrụ nke ọma maka gị? Ị chọrọ ịkọrọ ndị ọzọ ndụmọdụ gị na obi abụọ gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » Onye na -akwado akwarium